सिस्टम छ, सिस्टम छैन
केही हप्तादेखि साइप्रस पढ्न जानेहरूको संगतमा छु । साइप्रसको सीमामा प्रवेश हुँदा चाहिने दुई हजार युरो साट्न दौडधुप गरिरहेको युवामाझ म छु । उनीहरू देशभरिबाट आएका छन् । पासपोर्टमा जन्ममिति पढ्छुु । ती सबै म आमा भएपछि जन्मिएकाहरू छन् । छड्के आँखाले तिनको अनुहार चहार्छु । आँखाभरि सपना त देखिन्छ, तर अनुहारमा खुसी देखिँदैन । सबैजना अन्योलग्रस्त देखिन्छन् । भित्रभित्रै वात्सल्य नमीठो गरी
अनेरास्ववियूको केन्द्रीय समिति ३३५ सदस्यीय हुने, यस्तो छ बाँडफाँड
पूर्व एमाले निकट अनेरास्ववियु र पूर्व माओवादी निकट अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीबीच एकता भइ बनेको अनेरास्ववियूको केन्द्रीय समिति ३३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति हुने भएको छ । पूर्व अनेरास्ववियुबाट नयाँ केन्द्रीय समितिमा १८० र पूर्व क्रान्तिकारीबाट १५५ जना रहने भएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी ३१ भाद्र र १ असोजमा काठमाडौंमा बस्ने अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बताए
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : भ्रातृसंस्थालाई एउटै मापदण्डमा चलाउन माग
कांग्रेसमा सबै भ्रातृसंस्थाहरूका लागि एउटै मापदण्डमा बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । भातृसंस्थाअनुसार कार्यसमितिको पदावधि, संख्या, पदाधिकारी, महाधिवेशन प्रतिनिधिजस्ता संरचना अलगअलग हुनु राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूले ती संस्थालाई एउटै मापदण्डका आधारमा चलाउने गरी विधान बनाउन सुझाएका हुन् । बैठकमा डा. शेखर कोइराला, मीन विश्वकर्मा, जीवनबहादुर शाही, गुरुराज घिमिरेसहितका नेताले समान मापदण्डका आधारमा भ्रातृसंस्था चलाउन
रानीपोखरीमा पानीको स्रोत खोजी
रानीपोखरीको बीचमा भएको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ। उक्त मन्दिर प्रताप मल्लकालीन शिखर शैलीमा बन्ने भएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पोखरी निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणका सम्पदाविद् राजुमान मानन्धरका अनुसार पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले नसकेपछि प्राधिकरणले सुरु गरेको हो। महानगरले रानीपोखरी निर्माण गर्ने भनी ०७४ सालमा सुरु भएकोे थियो। तर, पोखरी कस्तो शैलीको बनाउने भन्नेमा
नयाँ प्रोजेक्टमा प्रियंका
‘क्वान्टिको’ र ‘बेवाच’ पछि प्रियंका चोपडाले अर्को नयाँ ईण्टरनेशनल प्रोजेक्ट हात पारेकी छिन्। अब उनी बालबालिकाको लागि बन्न थालेको सुपरहीरो सिनेमा ‘वी कैन बी हीरोज’ मा देखिदैछिन्। यस फिल्मका निर्देशक रबर्ट राड्रिग्सले गर्दैछन्। उनले ‘स्पाय किड्स’, ‘सिन सिटी’ र ‘एलीटा बैटल एन्जिल’ जस्ता चर्चित फिल्म निर्देशन गरिसकेका छन्। प्रियंकाका साथै यस फिल्ममा पेड्रो पास्कल, क्रिस्टीन
विधाता केसी विगत डेढ दशकदेखि चित्रकारितामा छिन्। सानैदेखि आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो उनलाई। कुची चलाएर घण्टौं रङसँग खेल्न मन पराउने उनी रातो बंगलामा ‘ए’ लेभल कक्षाका लागि आर्ट विषय पढाउँछिन्। चित्रको प्लटका लागि उनी विभिन्न नयाँ ठाउँ मनमौजी तवरले घुम्न मन पराउँछिन्। त्यसैले उनका चित्र फरकफरक विषयमा केन्द्रित हुन्छन्। कहिले पातहरूको आकारप्रकारलाई चित्रमा
बंगलादेशका बेहुलीले अब ‘भर्जिन’ लेख्नु नपर्ने
बंगलादेशको उच्च अदालतले महिलाको वैवाहिक प्रमाणपत्रबाट ‘भर्जिन’ शब्द हटाउन आदेश दिएको छ। सट्टामा अब ‘अविवाहित’ लेख्नुपर्ने भएको छ। यसअघि वैवाहिक प्रमाणपत्रमा महिलाका हकमा ‘भर्जिन’ (कुमारी), विधवा वा पारपाचुकेमध्ये एउटामा चिह्न लाउनु पथ्र्यो। विधवा र पारपाचुके भने कायम राखिएको छ। अदालतले ‘भर्जिन’ शब्दलाई अपमानजनक र विभेदकारीसमेत भनेको छ। यसबाट गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको पनि ठहर गरेको
विश्वभर आज : पाकिस्तानको मिसाइलदेखि बेलायतको विवादित निर्णय
विश्वभर आज कस्ता घटना भए ? धेरैको चासो छ । खासगरी प्रभावशाली मुलुकबीच राजनीतिक खिचातानी उस्तै छ । हङकङको आन्दोलन कम भएको छैन । उता बेलायतमा सरकारको निर्णयबाट रुष्ट मानिस आन्दोलित बनेका छन् । अमेरिका र इरानबीच वार्ताको वातावरण अझै बनेको छैन । यस्ता प्रमुख विश्वघटना यहाँ प्रस्तुत छ : ‘कश्मीर’निर्णयविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ
कलाकार नबनेको भए प्राध्यापक बन्थेँ : दमन रुपाखेती
मलाई बच्चैदेखि अभिनयमा रुचि थियो । मान्छेको हाउभाउ र बोलीचालीलाई दुरुस्तै उतार्ने कोसिस गर्थें । सधैँ हाँसीमजाक गरिरहने भएकाले साथीहरूले अभिनय गर्न प्रेरित गर्थे । मेरो मनमा भने ठूलो भएपछि प्राध्यापक बन्छु भन्ने थियो । बुबा प्राध्यापक भएकाले मलाई पनि उहाँझैँ बन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । बुबाले सधैँ पढाइमा ध्यान दिन भन्नुहुन्थ्यो । मेरो भाग्यमा भने कलाकार बनेर बाँच्न लेखेको रहेछ । ०४३
रविले भने– म सञ्चारकर्ममै थप क्रियाशील हुन्छु
हिरासतबाट धरौटीमा छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई उनका समर्थकले स्वागत गरेका छन् । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भएका लामिछानेले समर्थकको साथ र मायालाई आत्मसात् गर्दै सञ्चारकर्ममा नै थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । लामिछाने र उनका सहकर्मी युवराज कँडेललाई स्वागत गर्न सयौँ समर्थक नारायणी नदी किनारमा भेला भएका थिए । आफ्ना पक्षमा बोल्ने समर्थकलाई